Ukhuphiswano - Iindaba ze-iPhone | Iindaba ze-IPhone (Iphepha 2)
IPixel 5a entsha yindlela kaGoogle kwiApple ye-iPhone SE
Ngelixa silinde ukumiliselwa kwePixel 6 kunye nePixel 6 Pro yoluhlu, isigebenga sokukhangela sine ...
I-Samsung Galaxy Watch 4 entsha ayihambelani ne-iOS
I-Samsung Galaxy Watch 4 entsha ayizukuhambelana ne-iOS njengoko ifuna iinkonzo zikaGoogle ukuze isebenze kwaye isebenze.
Intloko entsha ye-B & O endlebeni iyigqitha i-Apple's AirPods Pro. Kwaye nakwixabiso.
Umenzi weRealme uza kuzisa i-Android yokuqala ngetekhnoloji yeMagSafe
Ikopi yetekhnoloji yakwa-Apple kaMagSafe ithathe ngaphantsi konyaka ukufikelela kwi-Android kwaye ikwenzile oko kwisandla seRealme.
IXiaomi igqitha iApple kwaye ibe ngumenzi wesibini we-smartphone
UXiaomi uye kwikota yesibini ye-2021, kumenzi wesibini we-smartphone, ogqithileyo kwi-Apple ewela kwindawo yesithathu
Isamsung iya kuhlaziya uluhlu lwayo lokusonga ii-smartphones kunye ne-smartwtaches ngo-Agasti 11
Nge-11 ka-Agasti, inkampani yaseKorea i-Samsung iya kuzisa uluhlu lwayo olutsha lokusonga ii-smartphones ze-2021 ukongeza ekuhlaziyweni kweewatchwatches zayo.
I-Apple Ultimatum yase-UK: inokunyamalala ngaphezulu kwesigwebo
Isimangalo phakathi kweApple kunye neOptis yeTekhnoloji yeselula ngaphezulu kwelungelo lobunikazi lobuchwephesha be-iPhone senza iApple isoyikise ngokunyamalala kweli lizwe.
U-Spotify ufuna ukwandisa ishishini lakhe ngeekhonsathi ezibonakalayo
Inkampani yaseSweden yokusasaza umculo, iSpotify, ifuna ukwandisa ishishini layo ngokuthengisa amatikiti eekonsathi ezibonakalayo nezihlala ngoku.
UApple ucebisa ukuba iMicrosoft isemva kwetyala likaEpic
I-Apple icebisa ukuba emva kwetyala lika-Epic lokulwa ukungathembeki nxamnye neApple nguMicrosoft
I-Apple inciphisa ukuveliswa kwee-AirPods njengoko ibango liwela
I-Apple iye yanciphisa ikhompyuter kwimveliso yee-AirPods ngenxa yobuninzi njengoko ukuthengisa kuye kwacotha ngenxa yokugqitha
Iqonga lePodcast elisekwe kubhaliso kwiSpotify liya kuhlawulisa ikhomishini ye-5% ukusukela kunyaka wesibini
Iqonga elitsha lePodcast elitsha likaSpotify lazise ngokusesikweni izicwangciso zalo zabapapashi bomxholo ukuze bakwazi ukwenza imali ngeepodcast zabo.
I-Android 12 iya kubonisa izaziso zokufikelela kwi-clipboard njenge-iOS 14
Inguqulelo elandelayo ye-Android, inombolo ye-12, iya kudibanisa isaziso sokufikelela kwi-clipboard kuso nasiphi na isicelo
I-smartwatch yokuqala kaGoogle iya kuba noyilo setyhula
Amarhe amva nje ahambelana nePixel Watch abonisa ukuba inokufika ngenyanga ka-Okthobha kwaye iyakuba noyilo lwesetyhula.
U-Apple uthi ukongeza iMessage kwi-Android kuya kuba kubi kubo
U-Apple ucacisa ukuba ukongeza inkonzo yeMessage kwizixhobo ze-Android kuya kuba kubi kubo
I-LG ibhengeza ukuba iyaphuma kwintengiso ye-smartphone
I-LG ibhengeze ukuba iyakushiya ngokuqinisekileyo ukwahlulwa kwe-smartphone kulo nyaka.
IMicrosoft isusa usetyenziso lweCortana lwe-iOS kunye ne-Android
ICortana isuswe ngokusemthethweni kwizixhobo ze-iOS neze-Android. Ekugqibeleni yafika imini yokuvalelisa
Ngaba ucinga ngokuthenga i-iPhone? I-Apple yamkela iGoogle Pixel 4a kwi-5 kunye ne-Samsung Qaphela i-20 njengotshintshiselwano
I-Apple inyusa uluhlu lwezixhobo ezamkelweyo njengotshintshiselwano kwaye yongeza izixhobo zeSamsung kunye neGoogle.
I-iPhone 12 Pro Max vs OnePlus 9 Pro: ukusebenza, ibhetri, amanqaku kunye nokunye
Isamsung kunye neApple bezilawula kwisiphelo esiphezulu sefoni ukusukela oko ii-smartphones zaqala ukongamela ...
I-OnePlus iveza i-smartwatch sayo sokuqala: iiveki ezi-2 zebhetri kunye nee-euro ezili-159
I-OnePlus ibhengeze ukubheja kwayo okokuqala kwii-smartwatches nge-OnePlus Watch, i-smartphone eneeveki ezi-2 zobude bexesha kunye nee-euro ezili-159.
Isamsung iyarhoxisa i-Galaxy Qaphela ngenxa yokunqongophala kwecandelo
Ukunqongophala kwamacandelo sele kuqalile ukungqubana kwizicwangciso zexesha elizayo zeSamsung zalo nyaka kwaye zinokuchaphazela yonke imveliso, kubandakanya neApple.
I-LG icinga ukuphuma kwimakethi ye-smartphone
Inkampani yaseKorea i-LG icinga ukuphuma ngokupheleleyo kwintengiso ye-smartphone.
I-iPhone 12 kunye ne-Samsung Galaxy S21, yintoni umahluko?
Siza kuthelekisa lonke uluhlu lwe-Apple iPhone 12 kunye noluhlu olupheleleyo lwe-Samsung Galaxy S21 kwaye ubone ukuba yintoni umahluko.
I-Intel ibhengeza i- "RealSense ID" njengenye indlela yobuso be-Apple
I-Intel ibhengeza i- "RealSense ID" njengenye indlela yobuso be-Apple. Inkqubo yokwamkelwa kobuso ilandelwe kuloo nto isetyenziswa yiApple ukusukela ngo2017.
NgoJanuwari 14, i-Galaxy S21 ithiwe thaca ngokusemthethweni
Isamsung iqinisekisile ngevidiyo ukuba nge-14 kaJanuwari izakuzisa ngokusemthethweni iGlobal S21
I-Apple imise okwethutyana ityala ngokuchasene ne-Prepear ngaphezulu kweempawu zelogo
Kubonakala ngathi eCupertino ulwazi luye lwangena kubo kwaye bafuna ukufikelela kwisivumelwano kunye nenkampani ye-Prepear yokusebenzisa ilogo efana neapile lika-Apple
Isamsung isusa iposti apho ihlekise ngokususwa kwetshaja kwi-iPhone 12
Isamsung isusa iposti apho ihlekise ngokususwa kwetshaja kwi-iPhone 12. Mhlawumbi kuba nabo baya kwenza okufanayo?
Isamsung inokwenza ngaphandle kwetshaja kunye neefowuni
Amarhe amva nje ahambelana ne-Samsung abonisa ukuba ayizukubandakanya itshaja kunye neefowuni kwiimodeli zayo ezilandelayo.
Ukuba yinjinjini yokukhangela emiselweyo kwi-iOS kuxabisa uGoogle phakathi kwe-8 ne-12 yezigidigidi ngonyaka
UGoogle akasenakuba yinjinjini yokukhangela emiselweyo kwizixhobo ze-iOS ukuba isimangalo esichasene ne-antitrust esifakwe eMelika siyaphumelela.
Isamsung ihlekisa ukuba iApple ayisabandakanyi itshaja kwii-iPhones zayo
Ukusuka kwi-Samsung bafuna ukubuyela kwimfazwe yeemveliso kwaye benza njalo besebenzisa impikiswano yeshaja ye-iPhone 12 entsha.
Isicelo seGoogle siyakwazi ukuqaphela iingoma ngokuzingombela
Umncedisi kaGoogle uyakwazi ukubona iingoma xa sibetha umlozi okanye hum
Imifanekiso yokuqala yewijethi yeSpotify kwi-iOS 14
Iwijethi yeSpotify ye-iOS 14, sele ikhona kwabanye abasebenzisi nangona ngenxa yezithintelo ze-Apple, ayisiyonto ifutshane iluncedo
Ismart Card ngoku iyafumaneka e-UK
Ikhadi le-Apple leSamsung, elibizwa ngokuba yiSamsung Card, ngoku liyafumaneka eYurophu, kwaye i-United Kingdom ililizwe lokuqala ukuyonwabela.
I-Android SE SE ibizwa ngokuba yiPixel 4a kunye neendleko ezingama-389 euros
UGoogle uveze iPixel 4a, inguqulelo yezoqoqosho yePixel yonyaka kunye neempawu ezigqwesileyo ezikumgangatho ophakathi.
IMicrosoft iyaqhubeka nokususa uCortana kwizixhobo zefowuni nakwizithethi
Umncedisi weMicrosoft, uCortana, uya kuba yinxalenye yeMicrosoft 365 (iOfisi yakudala 365), eshiya ubukho bayo kwizithuthi kunye nezithethi
Ngenxa yokuvalwa okubangelwe yi-coronavirus kuninzi lwehlabathi, uHuawei uye waba ngumthengisi omkhulu we-smartphone emhlabeni
IMicrosoft ibhengeza ukuvalwa ngokusisigxina koovimba bayo abaninzi
U-Microsoft ubhengeze ukuvalwa kwazo zonke iivenkile ezizisasaze e-United States, e-United Kingdom nase-Australia.
Ithayile ithumela izikhalazo zayo ngokuchasene neApple kwi-European Union
Inkampani yaseCalifornia Tile, ivakalise ukungonwabi kwayo kwiintshukumo ezenziwa yiApple ukuze iimveliso zayo zingasebenzi ngokuchanekileyo
I-Android Auto idlula iCarPlay kwaye sele isebenza ngaphandle kwentambo
I-Android Auto sele isebenza eSpain ngaphandle kwesidingo sokuqhagamshela i-smartphone ngentambo. Isebenza apha nakwamanye amazwe ali-18.
IMicrosoft irhoxisa inkomfa yayo yonjiniyela ngenxa yecoronavirus
IMicrosoft ibhengeze ukuba inkomfa yonjiniyela ebibanjwa rhoqo ngonyaka ngoMeyi irhoxisiwe ngenxa yecoronavirus
Ungazidlulisela njani izingxoxo zeWhatsApp ukusuka kwi-iPhone iye kwi-Android okanye ngokuchaseneyo
Sichaza indlela yokuhambisa yonke imiyalezo yakho ye-WhatsApp kwi-iPhone iye kwi-Android okanye ngokuchaseneyo, ngaphandle kokuphulukana neefoto okanye iividiyo zakho.
IHuawei idubula i-iPad Pro ngeMatePad Pro 5G
IHuawei idubula i-iPad Pro ngeMatePad Pro 5G yayo. Ngaphandle kuphela, kuba i-firmware yayo yeHuawei yiminyaka elula kude ne-iPadOS.
I-Samsung AirDrop ivumela ukwabelana ngomxholo kunye nezixhobo ezi-5 ngaxeshanye
Inqaku le-Samsung elikuvumela ukuba uthumele umxholo kwezinye izixhobo, ezifanayo kwi-AirDrop, ekuvumela ukuba uthumele umxholo ngaxeshanye ukuya kuthi ga kwizixhobo ezi-5.
Kubalulekile, nguAndy Rubin, ngokuqinisekileyo yehlisa iimfama
Emva kweminyaka embalwa ngaphandle kokubonisa iindaba, kwaye emva kokubhengezwa okungaphumelelanga kwe-GEM kubalulekile, inkampani kaAndy Rubin ivale iingcango zayo
Isamsung yazisa isizukulwana sesibini seGlass Buds + ngophuculo olubalulekileyo
Isizukulwana sesibini seefowuni ezingenazingcingo zeSamsung, iGlobal Buds, ngoku isemthethweni kwaye isinika uphuculo olunomdla kuzo zombini izandi, ibhetri kunye nokuhambelana.
I-Galaxy S20 kunye ne-Galaxy Z Flip ziibhetri ezintsha ze-Samsung ze-2020
Ukubheja kwe-Samsung entsha ye-2020 yenziwe yiGPS S20 kunye neGPS Z Flip. Sikuxelela yonke into ekufuneka uyazi malunga nesiphelo esitsha se-Samsung
Isizukulwana sesibini seGalaxy Buds, siya kuhambelana nesicelo kunye ne-Apple iPhone, into engakhange yenzeke neyokuqala.
Iringi iphinde ityholwa ngokukuhlola kunye nokuthengisa idatha yakho kwi-Android
Iringi eqinileyo, ephethwe yiAmazon, iphinda ikwiliso lesaqhwithi sobuqhetseba obusolwa kwi-app ye-Android
Ii-Smartphones ezilandelayo ze-Android zingasebenzisa i-Ultra Wideband ye-iPhone 11
Iifowuni ezizayo ze-Android zinokusebenzisa i-Ultra Wideband ye-iPhone 11. Iyafana neBluetooth, ilinganisa ngokuchanekileyo umgama phakathi kwezixhobo zombini.
USonos ubanga uGoogle ngokusetyenziswa kwamalungelo awodwa omenzi wechiza ngaphandle kokuya ngebhokisi
Isithethi se-Smart uSonos ufake isimangalo nxamnye noGoogle, emtyhola ngokusebenzisa amalungelo awodwa omenzi wechiza ngaphandle kwesivumelwano sangaphambili.
Iiteknoloji zokucinga zazisa isiVumelwano esitsha neApple
Iminyaka emi-3 emva kokubhengeza ukupheliswa kobudlelwane kunye ne-Imagination Technologies, iApple kwakhona ithembele kule nkampani ukusebenzisa itekhnoloji yayo yemizobo.
Umenzi wekhamera ye-iphone u-Sony akakwazi ukuqhubeka nemfuno ephezulu
U-Sony akanalo uqikelelo olwaneleyo lweemodyuli zekhamera yee-smartphones kwaye uneengxaki zokubonelela
Le yi "iPad Pro" yeHuawei, iMatePad Pro isemthethweni
IHuawei isandula ukuveza ipro Pro Pro yayo.Yebo, yithebhulethi enoyilo olusetyenziselwe ukulandela ipro Pro
IMicrosoft ilibazisa ukumiliselwa kwe-Surface EarBuds ukuya kwi-2020
Umphathi wemveliso kaMicrosoft uxele ukuba i-Surface Earbuds ayizukufika kude kube ngunyaka olandelayo.
U-Sonos usinika isaphulelo ukuya kuthi ga kwi-30% ukuba sihlaziya nayiphi na imveliso yabo
Umenzi uSonos, odume ngokuqhuma okoko kwabhengezwa iApple yeKhayaPod, ngenxa ...
Isamsung inyanzelisa "ukusonga" kwaye le nto intsha iyangqina [Ividiyo]
Umbono ovela kwi-Samsung uqobo kwaye kulindeleke ukuba ubuyisele i-Samsung yangoku ...
Okokugqibela i-Samsung igubungela impazamo enkulu kumfundi weminwe
Isamsung isandula ukukhupha isiziba ukusombulula ingxaki enkulu abanayo ngenzwa yeminwe yeGPS S10 yabo
UGoogle wazisa abantu abakhuphisana ne-iPhone, iMacBook kunye neeAirpod
UGoogle namhlanje uvule i-iPhone, iMacBook kunye nee-Airpods ezikhuphisana nazo: IPixel 4, iPixel 4 XL, iPixelbuds 2 kunye nePixelbook Go.
IMicrosoft ibuyela kwii-smartphones ngeSurface Duo: izikrini ezimbini kwaye zilawulwa yi-Android
I-Surface Duo kukubheja kukaMicrosoft ukubuyela kwintengiso yefowuni, nangona ngeli xesha kukhethe i-Android, endaweni yenguqulo yeWindows yezixhobo ze-ARM
IApple Arcade kaGoogle, iPaseji yokudlala, ngoku iyafumaneka eMelika nge- $ 4,99 ngenyanga
I-Google Play Pass, iApple Arcade kaAndriod, ngoku iyafumaneka eUnited States, kwaye isinika umohluko obonakalayo kwinkonzo yobulungu buka-Apple.
I-Samsung Galaxy Fold iya kufika eSpain ngo-Okthobha nge-2.000 euros
Inkampani yaseKorea iqinisekisile ngokusesikweni xa i-Samsung Galaxy Fold iza kuphehlelelwa eYurophu. Iya kufika eSpain phakathi ku-Okthobha.
I-Apple Music ye-Android iya kongeza inkxaso yeChromecast
Uhlaziyo olulandelayo lweApple Music ye-Android luya kusinika ukuhambelana neChromecast kunye nokufikelela kwizikhululo zikanomathotholo ezingaphezu kwe-100.000 njengeyona nto iphambili.
Ii-AirPods azifumani ngcebiso ngeNgxelo yabaThengi, into eyenziwa yiGlass Buds
NgokweNgxelo zabaThengi, iApple's 2nd AirPdos yesizukulwane sigqithise kakhulu ngeGlass Buds yakwaSamsung kwaye iyasilela ekufezekiseni isatifikethi.
I-Disney + iya kubonelela ngezixhobo ezi-4 ngaxeshanye, kunye nomxholo we-4K nge- $ 6.99 ngenyanga
Amakhwenkwe akwaDisney atyhila ukuba inkonzo yabo yevidiyo yeDisney + iya kuba njani: ukuya kuthi ga kwizixhobo ezi-4 ezinomxholo we4K we-6.99 yeedola ngenyanga.
IHuawei iphinda ilibazise ukwenziwa kwe-Mate X yokusonga
Abafana baseHuawei baphinde balibazise ukumiliselwa kwe-Mate X enokusongeleka ngaphandle kokunika inkcazo, kodwa kuthintela ukugculelwa kwe-Samsung.
Isamsung isusa iintengiso ezigxeka ukungabikho kwe-headphone jack kwi-iPhone
Inkampani yaseKorea isusile zonke iintengiso ze-YouTube ezigxeka i-iPhone ngaphandle kokufaka i-headphone jack
UFitbit uyavuma ukwehla kwintengiso ngokuthelekiswa nomntu okhuphisana naye, iApple Watch
Abafana eFitbit baya kuba semdeni wentengiso ye-smartwatch ngokuqokelela ilahleko ye-27% ngonyaka ngenxa yenxalenye ye-Apple Watch.
IGreen Qaphela i-10 iyakwenza ngaphandle kwe-headphone jack kodwa iya kubandakanya iadaptha
Isizukulwana esilandelayo soluhlu lweNqaku, iNqaku le-10, liya kuba yindawo yokugqibela ephezulu evela kwinkampani yaseKorea i-Samsung ukuhambisa ngehedfoni.
IMicrosoft isazisa kwiMac Book, umfana ukukhuthaza i-Surface Laptop 2
Abafana baseMicrosoft basungula intengiso entsha ngeMackenzie ehlekisayo, iMac kubahlobo, befanisa iMac Book yeApple.
INetflix isungula isicwangciso esitsha esiphathwayo kuphela eIndiya
Njengoko sele kukhankanyiwe, iNetflix isungula isicwangciso esitsha esiphathwayo eIndiya, isicwangciso esinexabiso eliphantsi sokusebenzisa umxholo kwizixhobo eziphathwayo.
UGoogle uyaphoswa malunga newaka leencoko ezirekhodwe nguMncedisi kaGoogle
Impikiswano ifikelela kubafana kuGoogle xa kusaziwa ukuba iincoko ezirekhodwe noMncedisi kaGoogle ngekhe zavuza.
Ewe, iAmazon iyangqina ukuba igcina incoko zakho kunye ne-Alexa
Ayisiyomfihlo kuye nabani na okanye ayifanelanga ukuba iinkampani zondle idatha yethu kwezinye iimeko. IAmazon iyakuqinisekisa ngokusemthethweni oko.
I-Apple ibuyisela i-Samsung $ 683 yezigidi ngokusilela ekufezekiseni ii-odolo zepaneli ye-OLED
U-Apple uhlawule i-Samsung $ 683 yezigidi ngokusilela ukuhlangabezana neethagethi zokuthengisa ezazibekelwe i-iPhone X
UGoogle uqala ukuvavanya uKwabelana ngokuKhawulezayo, i-AirDrop ye-Android
I-Android AirDorp iza kuvela kwisandla se-Android Q kwaye ibizwa ngokuba yi-Fast Share, kwaye isivumele ukuba senze imisebenzi efanayo ne-AirDrop
UGoogle urhoxile kwintengiso yethebhulethi ngokuqinisekileyo
UGoogle uqinisekisile ngeKhompyuter yeLizwe ukuba iyalahla ukukhuphisana ngokuchasene neApple kunye ne Samsung kwimakethi yethebhulethi
UShazam sele evumela ukuchonga iingoma ngee-headphone, nangona okwangoku kuphela kwi-Android
I-Shazam yaba, kwiminyaka embalwa edlulileyo, esona sicelo sisemgangathweni ukuze sikwazi ukubona iingoma ezivakala ngathi ...
IAmazon yongeza ilungu elitsha kusapho lwayo kwi-Echo Show 5
IAmazon isandula ukwazisa ilungu elitsha elitsha kusapho lwayo lwe-Echo, i-Echo Show 5.
I-YouTube yeNkulumbuso ngoku iyafumaneka kubafundi baseSpain
I-YouTube yeNkulumbuso yinkonzo yokubhaliselwa ehlawulelwayo kuYouTube ukonwabela yonke imixholo ngaphandle kwentengiso, ukhuphelo ...
I-ARM ibeka isiciko kwibhokisi kaHuawei
Inkampani yase-Bhritane i-ARM ibhengeze ukuba izakuyeka ukusebenzisana neHuawei, ke ayizukukwazi ukusebenzisa iprosesa yayo yaseKirin ngobugcisa be-ARM.
IHuawei iphelelwa ngohlaziyo lwe-Android kunye noGcino lukaGoogle
UGoogle usandula ukusungula i-torpedo kumjelo wamanzi waseHuawei, njengoko ibhengeze nje ukuba iyalahla ...
INkundla ePhakamileyo yase-US iyalivuma ityala ngokuchasene neVenkile yeApple kwaye iApple iyaphendula
I-Apple ibisoloko inomona kakhulu ngeVenkile yayo yeApp. Inyaniso yokuba ilawula okukuyo ...
I-Disney ithatha ulawulo olupheleleyo lweHulu
Emva kweenyanga ezimbalwa zothethathethwano, iDisney ikwazile ukuthatha ulawulo olupheleleyo lweHulu, nangona kuya kufuneka ilinde de kube ngu-2024 ukwenza njalo.
I-Android Q ikopa izijekulo ezintsha esinazo kwi-iPhone ene-iOS
Abafana abavela kuGoogle bazisa i-Android Q entsha abakopa ngayo yonke imiqondiso esinayo kwi-iOS yokuhambisa kunye nokuvala usetyenziso ...
Isamsung iyirhoxisile iGold Fold, ngaphandle kokuba abathengi bayayifuna ngokwenene
I-Samsung Galaxy Fold isendleleni eya kwiselfowuni ethathe ezona ndaba zingakhange zibekho ...
I-Bang & Olufsen ivuselela i-Beoplay A9 ngokongeza inkxaso kwi-AirPlay 2
Inkampani yase Bang & Olufsen inikezele ngokusesikweni isizukulwana esitsha seBeoplay A9, isizukulwana esitsha esinika idlalwe njengeyona nto iphambili kuyo.
INetflix ibhengeza iaudiyo ekumgangatho ophezulu ngenkonzo yayo
INetflix, eyona vidiyo ithandwayo emhlabeni, ibisoloko ihlaziyiwe xa kufikwa ...
I-Spotify sele inabasebenzisi abahlawulayo abazizigidi ezili-100
I-Spotify isandula ukubhengeza iziphumo zayo zezemali kwikota yokuqala yezemali ye-2019 ephele ngo-Matshi 31, kwaye ...
IFixit irhoxisa i-Galaxy Fold i-teardown ngesicelo se-Samsung
Ifowuni entsha ye-Samsung, i-Samsung Galaxy Fold, inika okuninzi ukuba uthethe ngayo, ngcono nangokubi….
Isamsung inyanzelwe ukuba ilibazise ukwenziwa kweGold Fold
Isamsung inyanzelwe ukuba ilibazise umcimbi weGlass Fold kwihlabathi liphela ngenxa yeengxaki ezibonwe kuvavanyo lokuqala
IMicrosoft iza kuphehlelela enye indlela kwii-AirPods
IMicrosoft iceba ukumilisela enye indlela kwii-Apple's AirPods, njengeAmazon, nangona okwangoku singazi ukuba nini.
I-Samsung Galaxy Fold inokugqitha kwiNqaku 7 fiasco
Emva kweeyure ezingama-48 zokusebenzisa, i-Samsung Galaxy Fold esezandleni zebhlogi ezininzi kunye nee-youtubers ziveze iingxaki ezinkulu kwiscreen
IAmazon iya kuba nenkonzo yokuhambisa umculo simahla
IAmazon ixokile ukukhuphisana netekhnoloji enkulu njengenkampani enye ukugcina iso ...
Ukhuseleko lwenzwa yeminwe ye-S10 eyilelwe yiQualcomm kulula ukuyidlula ngophawu lweminwe olushicilelwe nge-resin.
IAmazon ifuna ii-headphone ze-Alexa ukuba zikhuphisane nee-AirPods
IAmazon ayifuni kushiyeka ngasemva kwintengiso yee-headphone ezingenazingcingo, apho ii-AirPods zika-Apple ziye zaba…
I-iPhone ye-2019 inokubonelela ngenkqubo yokutshaja engenazingcingo
Ngokomhlalutyi uMing-Chi Kuo, uApple ufunda ukubanakho kokubandakanya inkqubo yokutshaja umva kwisizukulwana se-2019 se-iPhone.
Ikea ibonisa ukuba izithethi zayo ziya kuba njani ngokusebenzisana noSonos
Ikea, ivenkile yefenitshala yaseSweden, kunye ne-Sonos, inkampani yezixhobo zeaudiyo, sele babhengeza ukusebenzisana kwabo ukuzisa ...
I-Apple Music ifakwe kwizixhobo ezingama-40 ezigidi ze-Android
Inkonzo yokusasaza umculo ka-Apple iyafumaneka kwizixhobo ezingaphezu kwe-40 yezigidi ze-Android.
I-CFO yeHuawei ibanjiwe eCanada, mhlawumbi iyazi ngakumbi ngeApple kunathi
Intombi kamongameli waseHuawei, kunye neCFO yangoku yenkampani, wabanjwa ngoDisemba ophelileyo eCanada. Phakathi kwezinto zakhe kwakukho iimveliso zeapile ezahlukeneyo.
Iimveliso zasekhaya zeKoogeek zithengiswa eAmazon
Fumanisa olu khetho lweemveliso zasekhaya zaseKoogeek esizifumana okwexeshana ngexabiso elifanelekileyo elifumaneka kwiAmazon.
Le yindlela ekubukela ngayo ngefowuni yakho ye-Android
I-Android isisongelo esikhulu kubucala babasebenzisi bayo enkosi kwii -apps ezingabonakaliyo ezingekhoyo nomnini wefowuni owaziyo ngobukho bazo
U-Apple uphendula kwizikhalazo zeSpotify ngengxelo
Ngenye imini sikuxelele ukuba uSpotify uzithathile njani izikhalazo zakhe kwinqanaba elilandelayo, waziphakamisa kwiKhomishini yaseYurophu nge ...
Ezona mveliso zeKogeek kunye nedodocool ezilungileyo zithengiswa kwiAmazon
Ngaba ujonge izimvo zesipho ngoSuku lukaTata? Thatha ithuba lokubonelelwa kweyona mveliso ilungileyo yeKoogeek kunye nedodocool. Izibonelelo ezikhethekileyo.
I-Tidal sele ikuvumela ukuba uvelise kwakhona umgangatho wayo oyi-Master kwi-iPhone
I-Tidal, inkonzo yomculo yokusasaza eyaziwa ngokuba kukhetho lwayo lweTidal HiFi olunika ukufikelela ...
Iifowuni ze-Samsung zehla ngokukhawuleza nangoko nangoko kunee-iPhones
Imarike yesibini-isandla sohlwaya iintlobo ezithile kakhulu, kwaye i-Samsung yenye yezona ndawo zibaluleke kakhulu kwi-Galaxy yayo
I-Spotify ifikelela kwisivumelwano kunye ne-Samsung yokuba i-app yayo ifakwe kwangaphambili kwi-S10 entsha
Abafana kwiSpotify bafumana ikhontrakthi ekhethekileyo kunye ne-Samsung ukuze ii-S10s ezintsha zibe nenkqubo yokuhanjiswa kwenkonzo yomculo efakwe kwangaphambili.
IDisney + iya kuba nayo yonke ikhathalogu yeDisney kwaye isebenze ngokukodwa
I-Disney + iya kuba yividiyo yeDisney yokusasaza kwinkonzo yemfuno esele iza kutyhilwa ...
Sele sivavanywa ukusebenza phakathi kwe-iPhone XS Max kunye ne-Samsung Galaxy S10 +
Imodeli entsha ye-Samsung yoluhlu lweGlasi, i-S10 kunye nokwahluka kwayo, sele iphakathi kwethu kwaye, njenge…
U-Sonos usungula isizukulwana sesibini seModeli enye kunye neprosesa enamandla ngakumbi
U-Sonos usandula ukukhupha isizukulwana sesibini se-Sonos One, isizukulwana sesibini esinamandla ngakumbi kunye nenkumbulo engaphezulu elungele imisebenzi emitsha.
Esona saphulelo kwiKoogeek nakwiimveliso zedodocool kwiAmazon
Fumana ngakumbi malunga neKoogeek kunye nemveliso yedodocool esinokuyifumana ngezaphulelo zexeshana kwiAmazon.
Isamsung ifezekisile uyilo olukhulu ngeGPS S10 yayo, kodwa ngexabiso leenkqubo zokhuseleko ezinombuzo
Iwatchwatch yokuqala esongekayo esonga isihlahla ibizwa ngokuba yiNubia Alpha
Xa kwakubonakala ngathi umhlaba weewatchwatches awunakuyila ngaphezulu, iNubia isibonisa iswatchwatch eqengqelekayo enesikrini se-OLED
UXiaomi ukwenzile kwakhona, wakopa imifanekiso yamaphephadonga ashukumisayo kwi-macOS Mojave
UXiaomi waphinda wakopa iApple. Ukuba bebengonelanga kukukopa ubeko lwezixhobo, ngoku bakope imvelaphi enamandla ye-MacOS Mojave.
Enye indlela kaHuawei kwiGolden Fold ibizwa ngokuba yiMate X kwaye ixabisa ngakumbi
Kwiintsuku ezi-4 emva kokuphehlelelwa kweGolden Fold, inkampani yaseAsia iHuawei yazisa iMate X, inkampani yokuqala yokusonga i-smartphone.
Isamsung iya kongeza imilinganiselo yoxinzelelo lwegazi kwiGlass Watch Active yayo entsha
I-Smartwatches, ngakumbi ekuvukeni kweApple Watch, ijolise ekubekeni iliso kwezempilo kunye nokuzilolonga ...
Fumanisa ezona ziphuculo zifumanekayo kwiAmazon kukhetho lweKoogeek kunye nemveliso yedodocool okwexeshana efumanekayo ukuze ithengiswe.
Enye indlela entsha ye-Samsung yee-AirPods ihluziwe
Nge-20 kaFebruwari, inkampani yaseKorea i-Samsung izakusazisa ngokusesikweni isizukulwane esitsha se-IconX, esiza kukhuphisana ngaso neeAirPods zika-Apple
Izaphulelo kwiKoogeek nakwiimveliso zedodocool eAmazon
Fumanisa izaphulelo esizifumana kwiAmazon kolu khetho lweKoogeek kunye nemveliso yedodocool okwethutyana.
Ophumelele ukhuphiswano "Afotwe no-OnePlus" webe ifoto yeDSLR evela kwi-Instagram
Ubuxoki be-Shot kukhuphiswano lwe-OnePlus bufunyenwe: umsebenzisi ubela ifoto kwi-Instagram kwaye uthathwe ngekhamera ye-DSLR.
I-Disney ilayisenisi yomxholo ongengowokuqala kwinkonzo yevidiyo yokuhambisa
INetflix kunye neSpotify zivulile indlela yokufuna kunye nomxholo wokusasaza. Le ndlela ngoku i ...
U-Sonos ubhengeza udonga olutsha, isilingi kunye nezithethi zangaphandle
I-Sonos, isithethi kunye nenkampani yeenkqubo zesandi, ityhile iimveliso ezintsha eCalifornia ngoFebruwari 5. Kwi…
Esona saphulelo kwiimveliso zekhaya zaseKoogeek eAmazon
Fumana ngakumbi ngezaphulelo kwiKoogeek kunye nemveliso yasekhaya yedodocool okwethutyana efumaneka kwiAmazon.
Ukuthengiswa kweholide kwaSamsung kungaphaya kwe-iPhone yokuqala kwiminyaka yakutshanje
Kubonakala ngathi imeko kule Krisimesi idlulileyo ibikukunika i-Samsung smartphone kwaye ingeyiyo i-iPhone kunye ...
Umculo ku-YouTube uyahambelana nezithethi zikaSonos
I-Sonos okwangoku iyahambelana neenkonzo ezininzi zokusasaza ividiyo ezinje ngeSpotify, iDeezer kunye neApple Music. KU…
Uphando ngoFacebook, olususwe nguFacebook emva kokubandakanyeka kwelinye ihlazo
I-Facebook ishenxisa isicelo soPhando sokuqokelela ngokungekho semthethweni idatha kubasebenzisi abaya kuthi bahlawulise yona
I-Sonos iceba ukumilisela uluhlu olutsha lwee-headphone
Umvelisi waseCalifornia uSonos, usebenza kuluhlu olutsha lwee-headphones ezinokubona ukukhanya kunyaka olandelayo.
U-Apple uphendula kwizityholo zokuxhatshazwa kwamandla eMzantsi Korea
Inkundla yokhuphiswano izivile izityholo zika-Apple ngokubhekisele kwizikhalazo ezizifumeneyo kubasebenzi baseKorea kweli.
Windows 10 Iselfowuni, ingxelo yokufa okubhengeziweyo
IMicrosoft ibhengeze ngokusesikweni ukuba izakuyeka ukubonelela ngenkxaso yokuhlaziya ukhuseleko kuyo Windows 10 Iselfowuni ngoDisemba 2019.
Isamsung, i-Intel kunye neMediaTek yokubonelela ngeemodeli ze5G kwii-iPhones ze2019
Idabi elisemthethweni phakathi kweQualcomm kunye neApple inyanzele inkampani kaTim Cook ukuba izame ukufumana ababoneleli bemodem ye5G yesizukulwana esitsha seePhones.
I-Samsung Galaxy S10 iya kuboniswa ngoFebruwari 20 eSan Francisco
Isamsung izakwazisa ngeGPS S10 ngoFebruwari 20, kwiintsuku eziphambi kwe-MWC 2019 eyenzeka minyaka le e-Barcelona.
Iimodeli zeSamsung, LG kunye neSony ezixhasa idlalwe 2
NgeCawe ephelileyo u-Apple uvule isibhengezo ukuze abenzi bemidlalo yeTV abaphambili baqale ukubonelela ngokuhambelana neAirPlay ...
UXiaomi unyanzelisa ukukopa ii-AirPods kunye nokwazisa i-AirDots Pro
Kuthekani ukuba usebenza eHuawei kunye ne-tweet ngeakhawunti yabo esemthethweni evela kwi-iPhone?
Ngaba zi-5 iikhamera eziyimfuneko kwi-smartphone? KwiNokia 9 PureView kubonakala kunjalo
Ukuba unayo i-Apple TV, ulibale ngokubukela isiqendu esisebenzisanayo esitsha seMnyama Mirror kwiNetflix
INetflix ibhloka iApple TV okokuqala, iyishiya bucala ukuba sifuna ukubona imovie entsha yeSipili esiMnyama: IBandersnatch, imovie yokuqala yokusebenzisana.
I-Apple Music ithumela izaziso zokutyhala ukusikhumbuza ukuba iyafumaneka kwiAmazon Echo
Abafana abasuka eCupertino bazisa izaziso zokulumkisa ukuba iApple Music sele ihambelana neAmazon Echo kunye neAlex entsha.
I-Google Pixel 3 ifumana amanqaku afanayo ne-iPhone XR ngokwe-DxOMark
I-Google Pixel 3, emva kokuphumelela kuvavanyo lwe-DxOMark, ifumene amanqaku afanayo ne-Apple XR ye-Apple.
Isamsung iqala ukushiya unxibelelwano lwentloko yejack kunye nokusungulwa kwee-A8s
Inkampani yaseKorea i-Samsung ibe yenye yeenkampani ezimbalwa namhlanje eziqhubeka nokuphumeza unxibelelwano ...
UMicrosoft uqalise intengiso entsha echaza ukuba i-iPad ayisiyo ikhompyuter yokwenyani
Ixesha leholide lisondela kwaye iimfazwe zizixhobo ezithengisa kakhulu ziyaqhekeka kwiYouTube. Okokugqibela…
Isamsung yonyelisa isiphumo somzobo weGalaxy A8 enomfanekiso weDSLR
Umsebenzisi we-EyeEm utyhila ukuba i-Samsung isebenzise iifoto zayo ezithathwe nge-DSLR ukukhuthaza indlela yemizobo ye-Samsung Galaxy A8
Ifoto ye-iPhone X ayidluli kwifoto yePocophone
Ukuba ungumlandeli kwiinethiwekhi zeMarques Brownlee (kunye nesiteshi sakhe se-YouTube iMKBHD), uyakubona oko ...
I-Apple isebenza kuhlobo lweApple Music yeetafile ze-Android
Abafana abavela eCupertino basebenza kuhlobo lweApple Music yeetafile ezilawulwa yi-Android, intshukumo etsala ingqalelo ngenxa yenani elincinci lezixhobo zolu hlobo ezikhoyo kwintengiso.
UGoogle uvuselele umqhubi weselfowuni uGoogle Fi kwaye uyenza ihambelane ne-iPhone
Xa kungekho mntu wayeyilindele, uGoogle uhlaziya umqhubi weselfowuni: ibizwa ngokuba yiGoogle Fi kwaye iqala ukuziqonda nge-iPhone.
I-Logitech yokuthenga i-Plantronics, uphawu lwentloko
I-Logitech, kunye noku kuthengwa, okunamahemuhemu okuvala i-2.000 yezigidigidi zeedola, kuya kungena kwintengiso yentloko.
Umncedisi kaGoogle ngoku usebenza ngendlela emfutshane yeSiri
UGoogle namhlanje uhlaziye usetyenziso lomncedisi kunye nokudityaniswa kweendlela ezimfutshane. Indlela emfutshane ikuvumela ukwazisa umncedisi ngeSiri.
I-iPhone iphulukana nesabelo sentengiso eYurophu naseJapan, kunye neSpain ililizwe laseYurophu apho iye yehla khona kakhulu
Amanani amva eKandar Worldpanel asibonisa indlela iYurophu, ekhokelwa yiSpain, ekhetha ngayo i-Android kwi-iOS.
U-Alexa uya kukuphendula ngokusebeza
Kwinyanga ephelileyo iAmazon ibhengeze ukufika kweNdlela yeWhisper (imo yokusebeza okanye yokuhleba), kwaye ngoku iyafumaneka eMelika.
IPixel 3 ayibethi i-iPhone XS kwiibhentshi
I-Pixel 3 kunye nePixel 3 XL kunye ne-Snapdragon 845 yabo ayinanto yakwenza ne-iPhone XS kunye ne-iPhone XS Max nge-A12 Bionic yabo.
Yintoni entsha evela kuGoogle ye2018: IPixel 3, iPixel 3XL, uHubhu kaGoogle kunye nePixel Slate kaGoogle
Ukuba awukwazanga ukonwabela umsitho weemveliso ezintsha zikaGoogle ze2018, kweli nqaku sichaza zonke izinto ezintsha ezinikiweyo: I-Pixel 3 XL, iGoogle Home Hub kunye neGoogle Pixel Slate
IMicrosoft isungula iimveliso ezintsha zomphezulu
Inkcazo-ntetho yathetha ukuvuselelwa kancinci kwebala lomphezulu ngaphandle kotshintsho olukhulu, ngaphandle kweeNtloko zeNtloko zeNtloko.
I-Apple inokuzola kukhuphiswano lwe-Apple Watch, nantsi iNew LG Watch W7 ...
Abafana kwi-LG baqalise i-LG Watch W7 entsha ngenjongo yokutyala i-Apple Watch ngokuhlangula izandla zewotshi ye-analog.
IHuawei inika ibhanki yamandla kubasebenzisi abenza umgca kwiVenkile yeApple eSingapore
Inkampani yaseAsia iHuawei inike ibhanki yamandla eyi-200 phakathi kwabasebenzisi abanethemba lokufumana i-iPhone XS entsha kunye ne-iPhone XS Max eSingapore.
Uhlaziyo lwamva nje lokuba iApple Music App ye-Android ifumene izibonelelo, ekugqibeleni, ukuhambelana neAuto Auto, iCarPlay yeAndroid
I-Fitbit yazisa ngeTranger 3 tracker yomsebenzi
Ubhejo omtsha kaFitbit, uCharge 3, ubanga ukuba yeyona bracelet yomsebenzi ophambili ngoku kwaye ngaphandle kwezizathu.
Umdlalo we-Fortnite uza kwizixhobo ze-Android ngendlela yayo
Into ebonakala ngathi iyinto entsha kubasebenzisi be-Android yayiyimfihlo evulekileyo, kwaye ...
I-Samsung Galaxy Tab S4 entsha ijolise kwimveliso
Okwangoku, abavelisi abanikezela iipilisi ngokusebenza ngokuthelekiswa nekhompyuter kwintengiso ziSamsung kunye neApple. Nangona i-Samsung iye yazisa ngokusesikweni i-Galaxy Tab S4, ithebhulethi efuna ukuba yeyona ndlela inyani kwi-Pro Pro ngenxa yemveliso esisinika yona.
Iividiyo ezintsha zeSamsung zihlekisa nge-iPhone
Isamsung ihlasela iYouTube kwakhona, ipapasha iividiyo ezininzi ze "ingenius" yayo egxeka i-iPhone, iApple kunye nabasebenzisi bayo.
Isamsung kunye neqela laseFortnite kunye neNqaku 9
I-Fortnite iza kuphehlelelwa ekuqaleni kuphela kwi-Galaxy Note 9, ukongeza baya kufumana izibonelelo ezizodwa njengezikhumba kunye nolawulo olukhethekileyo.
Kwakhona iSamsung ifuna ukuhlekisa ngeApple ukuze ifumane ingqalelo
Eli ayiloxesha lokuqala ukuba kwenzeke kwaye inkampani yaseMzantsi Korea yenze lo mkhuba kwi ...
Umphezulu omtsha weMicrosoft Go ufuna ukuba yenye indlela kwi-iPad
Inkampani esekwe eRedmon yazise i-Surface Go, enye indlela enokuqwalaselwa nge-iPad, inenguqulo epheleleyo ye Windows 10
I-Samsung Galaxy S10 inokufika ineekhamera ezi-3 zangasemva kunye nezimbini ngaphambili
Amarhe amva nje ahambelana ne-Samsung Galaxy S10 iphakamisa ukuba iya kuba neekhamera ezi-5: ezi-3 zangasemva kunye nezimbini ngaphambili.
Isamsung aybaleki ukuthengisa okungalunganga kwi-S9 yayo
Kwizihlandlo ezininzi iindaba malunga nokuthengiswa kakubi kwezixhobo eziphathwayo kwaye ngakumbi isiphelo se-iPhone ...
UGoogle uvumela abanye ukuba bafunde ii-imeyile zakho zeGmail
Ingxelo entsha yeWall Street Journal ibanga ukuba uGoogle uvumela iinkampani ukuba zingene kwii-imeyile zabasebenzisi beGmail.
I-smartphone enesikrini esongelayo, le inokuba yi-smartphone entsha yeMicrosoft
Kude nokushiya amaqonga eselfowuni, iMicrosoft iyaqhubeka nokusebenza kwi-smartphone enesikrini esongelayo esiza kulawulwa Windows 10
ILaLiga iyaqonda ukuba ii-App zayo ezisemthethweni zihlola kuwe
Abafana baseLaLiga bayavuma ukuba basebenzisa usetyenziso olusemthethweni lwezixhobo eziphathwayo ukuqokelela ulwazi malunga nemivalo engahlawuli layisenisi.
I-Cube yoMlilo yeAmazon yeAmazon, umchasi onomdla weApple TV esayinwe yiAmazon
Inkampani kaJeff Bezos ivelise isixhobo esitsha ukoyisa igumbi lakho lokuhlala. Le yiCube yoMlilo yeAmazon yeAmazon. Ndikuxelele ukuba iqulathe ntoni.
Ayifani, ikopi ngqo ye-iPhone X. Le yiXiaomi Mi 8
Jonga umfanekiso ongasentla kwaye undixelele ukuba awuboni «zonke ii-iPhones ... Akukho mathandabuzo ukuba le nkampani ...
IAmazon Echo iyayiphazamisa kwakhona, okanye ukuba yimfihlo ekufuneka ilawule phezu kwazo zonke izinto
IAmazon Echo iyifumana kwakhona ngokubonisa ukuba imfihlo yabasebenzisi bayo isekude ekubeni ithathelwe ingqalelo xa ithumela incoko ngaphandle kwemvume.
I-Sonos iqala umgca omtsha weepakethe zesithethi esinexabiso
Inkampani yaseMelika u-Sonos isungule umgca wepakethi zesithethi kunye neemveliso ze-Sonos, esinokuthi sifumane ngazo izaphulelo ezinomdla.
Ikhaya likaGoogle kunye neMini yasekhaya yakwaGoogle iza kufika eSpain ngoJuni
Isithethi esihle sikaGoogle, iKhaya likaGoogle ekugqibeleni liza kufika eSpain ekupheleni kukaJuni, kunye neMini yasekhaya yakwaGoogle
Isamsung iya kuqhubela phambili ukumiliselwa kweNqaku 9 kunye neGPS S10 ngenxa yokuthengisa kakubi kwe-S9
Iindaba zivuza ukuba abafana e-Samsung banokuqhubela phambili ukumiliselwa kwe-Samsung Qaphela 9 kunye ne-Samsung Galaxy S10 xa kuthengiswa kakubi nge-S9.
UGoogle ubhengeza ukuthiya ngokutsha kweGoogle Drayivu ukongeza ukongeza izicwangciso zokugcina
Inkonzo yokugcina kaGoogle, uGoogle Drayivu, ayizukutshintsha igama layo kwiinyanga ezizayo, kodwa iya kwandisa indawo eyibonisayo namhlanje.
Imowudi ye-incognito inokuba yinyani kungekudala kwi-YouTube
Okwangoku, i-YouTube ivavanya umsebenzi omtsha ngaphakathi kwesicelo esibizwa ngokuba yimowudi ye-incognito, esivumela ukuba sikhangele ngokungaziwayo kwisixhobo sethu ngaphandle kokushiya umkhondo, ekucingelwa ukuba.
IMicrosoft ifuna iApple izise iMessage kwiWindows
Isithethi sikaMicrosoft sithe kungakuhle ukuba abasebenzisi beWindows bakwazi ukonwabela iqonga lomyalezo lika-Apple kwiikhompyuter zabo.
I-Android P iqinisekisa ngokusesikweni ukwamkelwa kwezimbo zomzimba ze-iPhone X
Okokugqibela amarhe okuba uGoogle angakopa izimbo zomzimba ze-iPhone X, aqinisekisiwe kuGoogle I / O uGoogle abambise kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo.
Ukuba ilizwe lakho alithethi siNgesi, eyona nto iphambili kwi-OS yeselfowuni yi-Android
Njengoko kubonisiwe kuphononongo lwamva nje, kuxhomekeke kulwimi oluthethwayo kwilizwe lakho, ukhetho lwakho luya kuhamba ngokuthanda i-Android okanye ukuthanda i-iOS
Inkqubo yoThungelwano iya kuyeka ukusebenza kwiWindows, emva kokufunyanwa yiApple
Inkonzo yemagazini yedijithali eyathengwa ngu-Apple kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo ibhengeze ukuba usetyenziso lweWindows luya kuyeka ukusebenza nge-30 kaJuni, umhla oya kuthi kwakhona unyamalale kwivenkile yesicelo seMicrosoft.
I-LG ibanga ukuba ayikhuphelanga inotshi ye-iPhone X kwi-LG G7
Inkampani yaseKorea i-LG, iyangqina ukuba uyilo lwe-G7 entsha, kukude ngaphambi kokumiliselwa kwe-iPhone X, ingxelo eyenziweyo kwimithombo yeendaba yaseKorea kungekudala emva kokubonisa iflegi yayo entsha
IPentagon iyakwalela ukuthengiswa kweetheminali zeHuawei kunye neZTE kwiziseko zazo zomkhosi
IPentagon isandula ukubhengeza ukuba zonke iimveliso ezenziwe nguHuawei kunye neZTE azizukukwazi ukuthengiswa kwiziseko zomkhosi urhulumente waseMelika anazo kwihlabathi liphela.
AbakwaNokia bathengisa icandelo lezempilo elalithenga kumnini we-Withings
AbakwaNokia abalisebenzisi ngokupheleleyo icandelo lokhathalelo lwempilo elathengwa kwi-Withings kwiminyaka emibini edlulileyo, kwaye uzama ukuyibuyisela kulowo wayesakuba ngumseki wayo.
UApple uzama ukweyisela abasebenzisi be-Android ukuba batshintshele kwi-iPhone eneevidiyo ezintsha
U-Apple uyaqhubeka notshintsho kwiphulo le-iPhone. Kwaye yenza njalo ngeevidiyo ezimbini ezintsha zexesha elifutshane kakhulu apho ziphuculweyo kwiVenkile yeApple kunye nemowudi yemifanekiso yeemodeli zamva nje.
Isibhengezo seHuawei P20 esinokuthi sisayinwe yiApple
Ngaphandle kwamathandabuzo iHuawei yenye yeefemu ezinkulu ezibonakalisa iApple ukwenza izixhobo zazo….
Iividiyo zomculo zikwaza kwi-Apple Music app ye-Android
Abafana abavela eCupertino baphinde bahlaziya isicelo seApple Music se-Android, benikezela ngokuqaqamba okufanayo kwiividiyo zomculo esele zinazo ngoku kwi-iOS 11.3.
IHuawei iphinda iphefumlelwe yiApple ebonisa umfanekiso weeAirPod
IHuawei iphinda ibonakalise ukungabikho kwengcinga ngokukopisha ngokungathandabuzekiyo ii-AirPods nge-earbud yayo yokuqala engenazingcingo.
I-OnePlus iyaqonda ukuba iApple yiyo ekhokelayo
I-OnePlus iyaqonda ukuba iApple iye yanefuthe eligqibeleleyo kuyilo lwe-OnePlus 6 yayo entsha, kwaye abanye abenzi be-Android bayikopa
I-Spotify iqikelela ukuba ukuphela konyaka iya kuba phakathi kwabangama-92 kunye nama-96 ezigidi ababhalisile
Uqikelelo lukaSpotify lwenani lababhalisi bacebisa ukuba ukuphela konyaka, inkampani inokuba phakathi kwabangama-92 ukuya kuma-96 ezigidi ababhalisileyo.
UGoogle uza kuhlasela kwezemfundo: Ithebhulethi eneChannelOS kumagumbi okufundela
UGoogle uphambi kweApple kwaye wazise ngeAcer ithebhulethi yokuqala ngeChannelOS efakiweyo. Le yiAcer Chromebook Tab 10
UFitbit Versa, kukubheja okutsha kukaFitbit kwizinto ezinxitywayo
I-Fitbit ivelise iFitbit Versa, enye eya kwi-Apple Watch enoyilo olufana nobuhle nangokwemisebenzi kwi-Apple Watch yamakhwenkwe aseCupertino.
Abaxhasi be-Android bathembeke ngakumbi kunabaxhasi be-iOS
Ngokophando lwamva nje, abasebenzisi be-Android bathembekile kwiqonga labo kunabaxumi be-iOS, idatha ebetha ngokukodwa ngenxa yokusikelwa umda.
I-Alexa iyabahleka ngokoqobo abasebenzisi bayo
Abasebenzisi abaliqela bayamangaliswa kukuhleka okuhlekisayo okuvela kwiAmazon Alexa ukongeza ekuboneni ukuba ezi zithethi zilumkileyo zinxibelelana njani ngaphandle kwemvume yazo.
Isicelo seApple Music se-Android sifumana uphuculo kwicandelo levidiyo
Isicelo seApple Music se-Android sihlaziyiwe songeza imisebenzi emitsha ephucula ukudlalwa kweevidiyo zomculo kunye nokuphucula uzinzo kunye nokusebenza.
Iscreen seGPS S9 yeyona nto intle kwimarike
Ngokuka-Display Mate, okwangoku esona sikrini sihle kwintengiso sinokufumaneka kwi-Samsung Galaxy S9 esandula ukubakho
Ngaba iVivo APEX ingumzekelo ekufuneka ilandelwe yiApple kunye neePhones zayo kunye neePads zekamva?
IVivo ikhona kwi-MWC kwaye i-Vivo APEX yayo ingangumzekelo olungileyo kwezinye iinkampani kunye namaqela azo exesha elizayo ukuba alandele.
Thelekisa phakathi kwe-Samsung Galaxy S9 entsha, i-iPhone X, i-iPhone 8 kunye ne-iPhone 8 Plus
Nje ukuba i-Samsung Galaxy S9 ibe semthethweni, sikubonisa uthelekiso esinokubona kulo lonke ulwazi lweGPS S9 kunye neGPS S9 + nge-iPhone X, i-iPhone 8 kunye ne-iPhone 8 Plus
I-Samsung Galaxy S9 vs iPhone X, iifowuni ezimbini xa kuthelekiswa nemifanekiso
I-Samsung Galaxy S9 ithiwe thaca ngokusemthethweni kwiintsuku ezimbini. Nangona kunjalo, kunokwenzeka ukuthelekisa ngemifanekiso kunye ne-iPhone X
IOS kunye ne-Android balawula intengiso ngesabelo se-99,9%
Zombini ii-Apple ze-Apple kunye neGoogle kaGoogle zezona zilawulayo ngoku kwintengiso yomnxeba, ngaphandle kwe-0,1% ekwabelwana ngayo ngeBlackBerry OS, Windows Phone kunye neTizen.
UGoogle usungula iGoogle Pay ngokuphendula iApple Pay Cash
Abafana kuGoogle bathatha isigqibo sokudibanisa i-Android Pay kunye neWalethi kaGoogle ukuze basungule iGoogle Pay, usetyenziso olutsha lokuhlawula kwi-Android ngenjongo yokuphelisa i-Apple Pay.
IXiaomi Mi Mix 2s ikopa ujongano ngokuthambo kwe-iPhone X
Ngokutsho kwevidiyo evulekileyo yomsebenzisi weXiaomi Mi Mix 2s, iXiaomi flagship elandelayo ikhuphela ngokungenazintloni imbonakalo yomsebenzisi we-iPhone X xa ungena kwimultitasking.
UGoogle kunye neNest badibana kwakhona ukuze balawule ikhaya elilumkileyo
UGoogle kunye neNest baya kudibana kwakhona basebenze kulawulo lwasekhaya. Sele besebenza kwiimveliso ezintsha kwaye banakho ukubonelela ngezisombululo ezinomtsalane kakhulu kumthengi
Usekela-mongameli weSamsung ukhululwe ejele emva kokusebenza iinyanga ezintlanu zeminyaka emi-5 awayegwetywe ngayo
Usekela-mongameli weSamsung, owagwetywa iminyaka emi-5 entolongweni ngo-Agasti ophelileyo, ukhululwe emva kwesibheno esanikezelwa ngamagqwetha akhe kwaye akhululwe naye kwezo zityholo.
Uvavanyo lweSpotify usetyenziso kwi-Android ebizwa ngokuba "ziPetroli"
I-Spotify ivavanya inkonzo entsha kwi-Android ebizwa ngokuba ziiPetroli. Yindlela entsha yokumamela umculo mahala
Izizathu ezi-5 i-HomePod iya kuyibulala iAmazon Echo kunye neKhaya likaGoogle- kwaye izizathu zokuba ayizukuyenza
Sihlalutya onke amathuba e-Apple HomePod entsha eza kuphehlelelwa ngoFebruwari 9 ngokuchasene nabona bantu bakhuphisana nabo: iKhaya likaGoogle kunye neAmazon Echo.
I-Disney ifumana umphathi wangaphambili we-iTunes kwiqonga layo lokusasaza elizayo
I-2018 iya kuba ngunyaka apho sibona inani elingenasiphelo leenkonzo zokuhambisa ividiyo zikhula ukuqala nge ...
UMIGIZI Z2, iifoto zokwenyani ze-iPhone X entsha
Enye i-clone ye-iPhone X isendleleni. Igama layo UMIGIZI Z2 kwaye inokuba nebhetri ehlala ukuya kwiintsuku ezi-3 ngaphandle kokuya kwitshaja
Imveliso yeGlasi X, ukusonga kwescreen kwe-Samsung, kuya kuqala ngo-Novemba
Imveliso ye-smartphone yokuqala enesikrini esongelayo kwimakethi, i-Samsung X ye-Samsung, ingaqala ngo-Novemba kulo nyaka kwaye ibone ukukhanya ngokusemthethweni kwi-MWC 2019
IWalethi kaGoogle kunye neGoogle Pay yiGoogle Pay
Ingxilimbela yokukhangela uGoogle isandula ukubhengeza ukudityaniswa kweenkqubo zayo ezimbini zokuhlawula: uGoogle Wallet kunye ne-Android Pay, ebizwa ngokuba yiGoogle Pay.
I-Samsung Galaxy S9 iya kuba neempawu ze-iPhone X-style
Iprosesa entsha ye-Samsung ye-Exynos ibandakanya izinto ezikhumbuza kakhulu i-iPhone X, kwaye kungekudala iza kuza kwi-Galaxy S9.
UDoogee V, elinye iqela le-iPhone X kunye nomfundi weminwe phantsi kwesikrini
Elinye iqela le-iPhone X lihluziwe.I-Doogee V, imodeli enkulu kunefowuni ka-Apple, nangona inekhamera yeenzwa ezimbini kunye nesikrini se-AMOLED
I-Apple ijoyina i-Consortium ye-audiovisual ephethe i-codec ye-AV1 yexesha elizayo
U-Apple ujoyine i-Alliance yeVidiyo yeMithombo evulekileyo ngokulandela ikhowudi ye-AV1 ukulungiselela ukufezekisa umgangatho ophezulu kunye neefayile eziphezulu zoxinzelelo lwevidiyo.
IAmazon neGoogle ziye zehlisa amaxabiso ezithethi zabo ezikrelekrele
Ngokwabahlalutyi, iGoogle kunye neAmazon ziye zehlisa amaxabiso ezithethi zazo ezikrelekrele ngaphambi kokufika kwePod Home, ngenxa yoko ukubonisa ukuba ngumhlalutyi ngumsebenzi ongadingi lwazi lukhulu, ubuncinci abayibonisi njengoko injalo eli tyala
I-HTC, i-Motorola, i-LG kunye ne-Samsung zibanga ukuba azinciphisi ukusebenza kwezixhobo kunye neebhetri ezindala
Ukulandela impikiswano yezixhobo ezineebhetri ezindala ezivela kwiApple, HTC, Motorola, LG, kunye ne-Samsung, bayakuphika ukwehla kokusebenza kwezixhobo zabo
I-China iphucula inkqubo yayo yerhafu ukuququzelela utyalomali ziinkampani ezinje ngeApple
I-China kugqatso lwayo lokuba lelona lizwe libaluleke kakhulu kwihlabathi sele ibhengeze uxolelo lwerhafu kwiinkampani zangaphandle ezifuna ukutyala imali elizweni.
I-Samsung Galaxy S9 iya kwalatha kwikhamera ephindwe kabini ime nkqo
Uninzi lwabasebenzisi beApple baqinisekile ukuba ikhamera emile ngasemva ilungile ...
UGoogle uya kuvula iivenkile zakhe eIndiya ukukhulisa ukuthengisa kweGoogle Pixel 2
UGoogle ufuna iGoogle Pixel 2 ukuba ibe yenye indlela eIndiya, kwaye ufuna ukuvula iivenkile zakhe kwilizwe kunyaka olandelayo.
Isamsung yayiza kuvula isithethi sayo kunye neBixby ngexesha lokuqala lesiqingatha se2018
Kucacile ukuba i-ApplePod yasekhaya iya kuba nabantu abaninzi okhuphisana nabo, enyanisweni isithethi sabafana ...
Umncintiswano we-iPhone X sele sele "useziko." I-Samsung Galaxy S9 iqala ukuvuza
Kwaye zezi veki zinolwazi lwazo zonke iintlobo zifika ngesixhobo esitsha okanye mandithi, izixhobo ezitsha ...
I-smartphone yokuqala yaseTshayina enotshi ye-iPhone X yiLeagoo S9
Inkampani yaseTshayina iLeagoo icacisiwe ngokucacileyo yi-iPhone X, ukuyila itheminali yayo elandelayo, iLeagoo S9.
I-iMessage ithatha iMessages kwiselfowuni ye-Android
Ngaba uyafuna ukufumana imiyalezo ye-iMesaage kwiselfowuni yakho ye-Android? Ukuba unayo ikhompyutha ye-Mac ungazama ukusebenzisa iMessage
Ukubheja kwe-Samsung kwiskena se-iris ngaphambi kokubonwa kobuso
Isamsung iyakushiya ukubonwa kobuso ithande iskena se-iris kwizixhobo zayo ezitsha eziziswe kulo nyaka
Injini eyintloko ye-Android Wear ishiya uGoogle
I-Android Wear isandula ukufumana ukubethwa ngokuqatha okunokuchaphazela ikamva leqonga, njengoko injineli eyintloko isandula ukubhengeza ukumka kwakhe kuGoogle.
Oppo R13, abavelisi baseTshayina bafuna i-iPhone X
Abavelisi baseTshayina baqala ukuthatha njengobhekiso kuko konke okulungileyo nokubi koyilo lwe-iPhone X kwii-smartphones zabo ezintsha.
Ityala elitsha ngokuchasene ne-Apple yamalungelo awodwa omenzi wechiza. Ngeli xesha, ikhamera kabini
Isimangalo esitsha esifunyenwe ngu-Apple sokophula umthetho welungelo elilodwa lomenzi wechiza. Ngeli xesha, yiCorephotonics ebanga ukuba isigebenga saseCupertino sisebenzise amalungelo awodwa omenzi wechiza.
Isamsung iyaqhayisa ngobuhle beetheminali zayo xa ithelekiswa ne-iPhone
AmaKorea avela kwaSamsung athumele kwiwebhusayithi yawo yeYouTube ividiyo entsha abasibonisa ngayo ubomi bomsebenzisi kwi-iPhone yokuqala
Iingxaki ziyaqhubeka kwiGoogle Pixel 2 XL: ukusilela kwimowudi yemifanekiso kunye nokurekhodwa okungalunganga komsindo
Kwaye kubonakala ngathi uGoogle akayiphakamisi intloko yakhe ngeGoogle Pixel 2 kwaye ngakumbi ngakumbi ngemodeli ...
I-Indiya igqibe i-United States kwaye iye ibe yeyona ntengiso inkulu ye-smartphone
I-Indiya isandula ukugqitha i-United States njengelizwe lesibini kunye nee-smartphones ezininzi ezithengiswa kwihlabathi liphela
Iiyunithi ezininzi zeGoogle Pixel 2 XL ziya kuba neengxaki "zempembelelo evuthayo" kwisikrini
Okokuqala, lumkisa ukuba oku kubonakala ngathi yingxaki ethile kuthotho lwezixhobo abanye abasebenzisi abanazo ...
Thelekisa ukunganyangeki kokuwa phakathi kwe-iPhone 8 Plus kunye neGoogle Pixel 2 XL
Kule vidiyo ilandelayo, sikubonisa ukuba i-iPhone 8 Plus okanye iGoogle Pixel 2 XL iyanyamezela ngokwaneleyo ukuba iwe
Isamsung yazisa ngeBixby 2.0 yezixhobo zeSmart
Inkampani yaseKorea i-Samsung iqalile ukuthatha amanyathelo ayo okuqala malunga nolawulo lwasekhaya nge-Bixby 2.0
Umvelisi wezixhobo zemidlalo uRazer uza kuzisa i-smartphone ngoNovemba 1
Umvelisi wezixhobo zemidlalo, uRazer, ubhengeze ukuba nge-1 kaNovemba izakuqalisa imveliso entsha, mhlawumbi eyi-smartphone
IM Mini yasekhaya kaGoogle inokusebenza kuphela ngemiyalelo yelizwi
Umncedisi omtsha kaGoogle akakwazanga ukufikelela kwintengiso ngendlela embi, kuba iqhosha lomncedisi lihlala lisebenza
Ngalesi sicelo ungasebenzisa uMncedisi kaGoogle ngefowuni yakho ye-Android kunye neeAirPod
Enkosi kule sicelo se-Android, sinokusebenzisa uMncedisi kaGoogle ngeApple AirPdos yethu
IMicrosoft iyangqina Windows 10 Iqonga leSelfowuni lifile
IMicrosoft iqinisekisile ngokusemthethweni ukuba izakuyeka ukuxhasa Windows 10 Iselfowuni, ishiye iqonga layo eliphathwayo ngokupheleleyo.
Abalingani beMicrosoft ngeSpotify yokuGqithisela abaSebenzisi boMculo beGroove kwaye bayicime inkonzo
Emva kokubhengezwa kokuvalwa kwenkonzo yomculo kaMicrosoft yokusasaza, iSpotify izakuthatha ababhalisile benkonzo.
UGoogle uzokwazisa okhuphisana naye kwiAmazon Echo Show, enesikrini se-7-intshi
UGoogle uyabona ukuba ufika njani kade kwimakethi yabancedisi kwaye ufuna ukumilisela inguqulelo entsha ngescreen se-7-intshi
I-Spotify isibuyisela emva ngexesha kunye nomculo esasimamela xa sasineminyaka engamashumi amabini
Ngaba unesibindi sokubuyela kwixesha elidlulileyo kwaye ukhumbule umculo owawumamele xa uneminyaka engamashumi amabini? I-Spotify isizisela uluhlu lokudlala kunye nomculo owawumamele xa wawuneminyaka engama-20 ubudala
IMicrosfot iceba ukubeka iSurface Pro entsha ngonxibelelwano lwe-LTE kwintengiso ezayo ngoDisemba ukukhuphisana ne-iPad Pro LTE
IHuawei ihleka i-ID yobuso kunye nokusilela kwayo kwi-Keynote kwisibhengezo sayo samva nje
Abo bathe bakuxhamla ngenene okutsaliweyo ngabafana abavela eHuawei, abathe basungula esi sibhengezo simnandi sihlekisa ngokusilela.
Ukuphuculwa koMncedisi kaGoogle ukukhuphisana ngokuchasene neSiri ye-iOS 11
UGoogle uveze iindaba eziza noMncedisi kaGoogle kwaye iyakwenza ukuba ikhuphisane nohlobo olutsha lweSiri ye-iOS 11.